Daawo Mahrajaanka xoolo xasuuqa dalka Nepal (Maxey tahay sababtu?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daawo Mahrajaanka xoolo xasuuqa dalka Nepal (Maxey tahay sababtu?)
2nd December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Dalka Nepal ee deriska la ah Hindiya waxaa jimcihii iyo sabtidii lasoo dhaafay (28-29 November 2014) lagu xasuuqay xoolo gaaraya ilaa 300 kun oo neef oo isugu jira Lo’, Ari iyo Digaag.
Wuxuu qeyb ka tahay dhaqan foolxun oo 5 sano oo kasta ay mar sameeyaan dadka Hunduuska oo ee u dhashay dalka Nepal. Waxey xoolahaas faraha badan u xasuuqayaan iney ugu dhawaadaan wax ay ugu yeeraan Ilaahyada Awoodda (Gadhimai).
Xoolahaan boqolaalka kun ah ayaa lagu laayaa fagaare weyn oo ku dhow Macbad ay leeyuhiin dadkaas oo ku dhow xadka Hindiya iyo Nepal, waxeyna falkaa ku tilmaamaan Mahrajaan.
Xasuuqa xoolahaan ayaa lagu bilaabayaa kumanaan lo’ ah, waxaana lagu xijinyaa ari iyo haad fara badan oo digaag ka mid yahay.
Kooxaha u dooda xuquuqda Xaawaanaadka ee dalkaas ayaa ku tilmaamay xasuuqa xoolaahan mid aan loo dul qaada karin, hase ahaatee dadka Mahrjaankan wada ayaa ku adkeystay in sanadkaan ay badi doonaan xoolaha ay xasuuqayaan.
Dadka Hunduuska ee Nepal ayaa rumeysan in xasuuqa Xayawaadku uu raali gelinayo wax ay u yaqaanaan Ilaahyada Awoodda, arrintaasina usoo jiideyso barwaaqo iyo nasiib.
Mas’uuliyiinta dowladda ee gobolka ay xoolahaan lagu gowracayo ayaa sheegay ineysan awood u laheyn iney arrintaan joojiyaan, maadaama dadka sameynaya ay caqiido ahaan u rumeysan yihiin.
Kumanaan boolis ah ayaa la dhigay Fagaaraha lagu leynayey xoolahaan si looga hortago iska horimaad dhexmaray kuwa xoolaha leynaya iyo kooxaha u dooda Xuquuqda Xawaanka.
Nepal oo dadkeeda lagu sheegay 27 Milyan oo 80% yihiin Hunduus waxey deris la tahay Hindiya oo lo’da laga barakeysto, halka reer Nepal xasuuqa Lo’da ugu dhawaanayaan Ilaahyada beenta ee ay aaminsan yihiin.
Marka la dhameystiro xasuuqa xoolaha ayaa waxaa laga saara maqaarka oo la iibsanayo, halka raqda xoolahaas lagu aaso god weyn oo loo diyaariyey.
Baarlamanka Soomaaliya oo maanta la horgeynayo mooshinka ka dhanka xukuumada RW Cabdilwei
Xoogsato farabadan oo Kenyan ah oo lagu xasuuqay Mandheera